Ukubaluleka kwesayikholoji yombala kubugcisa nakwiyilo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ukubaluleka kwengqondo yengqondo kubugcisa kunye noyilo Kubaluleke kakhulu kubugcisa begraphic nangaphandle. Umbala lulwimi olo dlulisa imiyalezo inamandla njengaleyo idluliselwa yimifanekiso kunye neefonti. Umbala omnye uya kuhlala ukhona inxulunyaniswa nemvakalelo, umqondiso othetha imiyalezo yesibini ekwaziyo ukuhambisa zonke iintlobo zeemvakalelo.
Umbala ube ngu into esisiseko kubugcisa apho amagcisa azo zonke iintlobo ayisebenzisile njengeyona nto ibalulekileyo kwimisebenzi yabo, umbala obomvu uya kubonisa umdla ngelixa uluhlaza uzolisa. Umbala uhlala kwaye uya kuhlala ulwalamano olukhulu lomculi.
Imibala kunye neemvakalelo zizinto ezinxulumene ngaloo ndlela ulawula ukuvelisa ulwimi olubonisa nxibelelana nendlela yethu yokubona umhlaba. Umbala okanye i-hue ayikho enye into ubude beengqondo ezilawulwa yingqondo yethu emva kokubonwa ngamehlo ethu, le yinxalenye kuphela kodwa Uhambisa ntoni umbala kuthi? Besisoloko siziva sinoxolo xa sibukele ukutshona kwelanga okanye imvakalelo yamandla xa sihamba ehlathini. Ubudlelwane bethu nemibala buphezulu kakhulu kwaye ilawula ukuhambisa zonke iintlobo zemvakalelo. Eminye imibala iya kusenza sizive sinamandla kunye nabanye ngokuchaseneyo, ngokusekwe kubo bonke obu budlelwane phakathi kombala neemvakalelo Intengiso kunye nobugcisa basebenzise esi sixhobo njengesixhobo ukufikelela kumbukeli.
Imibala eqokelelwe ku-damaqela aphambili: kushushu kwaye kuyabanda. I imibala efudumeleyo Zezona ndizazi kakhulu basondela emthubi nasemlilweni, imibala leyo bahambisa amandla ngakumbi.
Los imibala ebandayo ngabo basondela kuluhlaza kunye nolwandle, le mibala kudlula ukuzola noxolo.
Kufuneka siyazi loo nto imibala ethile inxulumene neemvakalelo ezithile kodwa kutheni? ukuba sijonga ukutshona kwelanga siza kuyibona imibala yeorenji (eshushu) leyo zidlulisa iimvakalelo zokuzola. Imvakalelo yokuzola oyifumanayo ukutshona kwelanga yenza ubuchopho bethu buseke ubudlelwane phakathi kwelo xesha limnandi kunye neempawu zayo eziphambili, kule meko umbala. Ingqondo yethu isebenzisa ubudlelwane bezinto Ngokuqhubekayo, umzekelo sidibanisa imilo yobuso kunye nebala eludongeni.
Kulo ukuwu- singafumana iimbekiselo ezininzi ngokubaluleka kombala kunye nokusetyenziswa kwawo ukuhambisa iimvakalelo. Ifilimu nganye inombala othile wombala kuba kuxhomekeke kwifilimu nakwibali layo, kufuneka imele into ethile okanye enye. Umboniso bhanya-bhanya ngothando nolonwabo awufani noloyiko, imibala emi ngolu hlobo lokutshintsha kwaye isetyenziselwa ukuhambisa ngcono iimvakalelo abafuna ukuzimela.
Kuxhomekeke kwinto esijonge ukuyimela kufuneka sisebenzise umbala omnye okanye omnye. Imibala lolunye olunye ulwimi ekufuneka silikhumbule kuzo zonke iintlobo zeeprojekthi ezibonakalayo. Xa siza kwenza naluphi na uhlobo lweprojekthi yemizobo ekufuneka siyenzile yazi ukusuka kumzuzu wokuqala oko sijonge ukumela ukuze ndi Guqula loo myalezo ngokucacileyo ngokusebenzisa umbala. Kuyacetyiswa yenza amalungiselelo angaphambili yalo naluphi na uhlobo lweprojekthi cwangcisa kakuhle wonke umxholo weprojekthi yethu kwaye ube nakho ukukhumbula ezi ntlobo zemibuzo ecacileyo. Ngaphambi kokuba uqale ukusebenza, cinga malunga nemibala oza kuyisebenzisa emele.
Umbala wam umele ntoni? Ndifuna ukumela ntoni? Ngaba umbala wam uhambelana nale nto ndiyikhangelayo?
Ukumela iimvakalelo kunye neengcinga ngombala Ngumsebenzi ekufuneka silumke kakhulu kuba umbala ngumanyano olukhulu ekubonakaliseni iimvakalelo Ngaba ungazibona ubona imovie eyoyikisayo epinki? inokuba ukufela kodwa uhleke ...
Limibala iya kuhlala inxulunyaniswa neemvakalelo Ke ngoko kufuneka sihlale siqinisekisa kwangaphambili ukuba into esijonge ukuyimela inokufezekiswa ngombala othile. Funda ukudlala ngombala ngendlela efanayo odlala ngayo nemifanekiso, iimilo kunye neefonti.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » Ukubaluleka kwengqondo yengqondo kubugcisa kunye noyilo